ऋणले कहिलै पिछा छो'ड्दैन् ? यी उपायबाट पाउनुहुनेछ छुटकारा -
एजेन्सी,२९ साउन । अधिकां’श मानिसले आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्नका लागि ऋ’ण लिने गर्दछन् । उधारो तथा ल्याएको ऋ’ण तिर्न नसके जीवनमा निकै त’नाव खे’प्नु पर्ने हुन्छ। ऋ’णको दलदलमा फसेका व्यक्तिलाई बा’हिर निस्कन निकै क’ठिन हुन सक्छ। जुन व्यक्तिको कु’ण्डलीमा ऋ’णको दो’ष हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले उधा’रो तथा ल्याएको ऋ’ण तिर्न नसक्दा निकै सम’स्या खे’प्नु पर्ने हुन्छ। ज्योतिष मनिष शर्माले कुण्डलीमा भएको ऋ’ण दो’ष ह’टाउने निम्न उपायका बताएका छन् ?
कुण्डली र ऋ’णसँग सम्बन्धीत योग
ज्योतिषका अनुसार कुण्डलीमा षष्ठम, अष्टम र द्वादश भाव ऋणसँग सम्बन्धीत हुन्छन्। त्यसलाई मंगल ग्र’हको का’रक मानिन्छ।
मंगह क’मजोर हुँदा वा पा’पग्रहसँग सम्बन्धीत हुने हुँदा अ’ष्ठम, द्वा’दश, ष’ष्ठम भा’वमा अशु’व हुने हुँदा व्यक्ति ऋ’णी बन्ने गर्दछ।
यदी यी भाव र मंगलसँग शुभ ग्र’हको दृ’ष्टी पर्दा ऋ’ण हुन्छ तर त्यसबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ।
शनिबार ऋ’णमुक्तेश्वर महादेवको पु’जा गर्ने
मंगलबाट पु’जा, दान तथा होम गर्ने र जप गर्ने
मंगल र बुधबार ऋ’ण लिने दिने काम नगर्ने
रातो र से’तो बस्त्रको प्रयोग गर्ने
श्रीगणेशको पु’जा आराधना गर्ने